Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » 'Fanitsakitsahana fiarovana lehibe': sidina manidina manakaiky ny Emirates A380
Ny vondrom-piarahamonina drone dia nanameloka mpandraharaha iray noho ny fisidinana tsy tamim-piheverana taorian'ny fakana sary mampiseho drone tonga mampikatona ny Airbus A380.
Ny vondrom-piarahamonina drone dia nanameloka ny mpandraharaha iray noho ny fisidinan-dresaka tamim-pilaminana taorian'ny horonantsary navoaka tamin'ity herinandro ity dia naneho fiaramanidina tamina loza lehibe nanakaiky ny fiaramanidina mpandeha ara-barotra lehibe indrindra manerantany, ny Airbus A380.
Nalaina sary tao amin'ny Seranam-piaramanidina Plaine Magnien ao amin'ny nosy tropikaly Mauritius, mampiseho ny fiaingan'ny Emirates A380 ilay horonantsary. Rehefa nanomboka niakatra ny jet, dia nanjary miharihary fa ilay drôna dia manidina manakaiky ny lalan'ny sidina, manidina ambany noho ny 100 metatra miala ny tendron'ny elany ankavia.
Mahavita mitondra mpandeha mihoatra ny 500 amin'ny fanaingoana kilasy telo sy mpandeha 850 ao anaty kininin-trano miharo hetra, ilay fiaramanidina dia fantatra fa ny sidina EK702 an'ny Emirates an'ny Dubai, any Dubai, araka ny sary sy tranokala FStoppers. .
Tany am-piandohana dia nipoitra an-tserasera ilay clip manaitaitra taorian'ny nandefasan'ilay lehilahy frantsay Thierry Paris tao amin'ny Facebook, izay mamaritra ny tenany ho kapitenin'ny A380 ho an'ny Air France. Raha mbola naka ny horonantsary izy, ny fandefasana indray ny horonantsary nataon'i AnthonyVlog dia nahazo mpijery maherin'ny 65,000 hatramin'ny talata lasa teo.
Nisy ny tombantombana fa sandoka ilay horonantsary ary nanjary fanadihadiana manokana tamin'ny alàlan'ny vavahady Droning On aza ny rakitsary, izay nahatonga ny fehin-kevitra fa tena izy.
Mandritra izany fotoana izany, ny tsikombakomba ny mpanamory fiaramanidina dia namboarin'ireo mpankafy drone namany an-tserasera. Nampitandrina i Oliver Kmia, mpanoratra FStoppers, fa “handrehitra ny afon'ny vahoaka manohitra drone” ity tranga ity.
"Na izany aza, ny fampidirana fitsipika sy fameperana vaovao dia tsy hanakana ny olona adala hanao zavatra toy izany," hoy ihany i Kmia.
Ny Airbus A380 dia fiaramanidina fiaramanidina misy rindrambaiko misy karazany roa, vatan'ny fiara lehibe efatra, novokarin'ny mpanamboatra eropeana Airbus. Io no seranam-piaramanidina mpandeha lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ary ny seranam-piaramanidina izay iasany dia manana fitaovana nohavaozina hampiantranoana azy. Tamin'ny voalohany dia nantsoina hoe Airbus A3XX izy io ary natao hanoherana ny ampihimamba an'i Boeing amin'ny tsenan'ny fiaramanidina lehibe. Ny A380 dia nanao sidina voalohany tamin'ny 27 aprily 2005 ary niditra serivisy ara-barotra tamin'ny 25 Oktobra 2007 niaraka tamin'ny Singapore Airlines.